News Collection: सुपरस्टारका नजरमा नायिका
सुपरस्टारका नजरमा नायिका
सुपरस्टार राजेश हमालले नयाँ पुराना पुस्ताका नायिकासँग काम गरेका छन्　। नेपाली फिल्ममा नायिकाको भूमिका कमजोर हुने उनको ठम्याइ छ　।
दीपक रायमाझीको निर्देशन र छवि ओझाको निर्माणमा ०४७ मा बनेको फिल्म 'युगदेखि युगसम्म'बाट मेरो फिल्मी करिअर सुरु भयो　। यस अवधिमा थुप्रै नयाँ नायक आए, गए　। केही नायक विस्थापित भए　। धेरै नायिकाको प्रवेश भयो　। नयाँ नायिका झुल्किए र हराए　। मैले आफ्ना जीवनका स्वणिर्म समय नेपाली फिल्मकै लागि खर्च गरेँ, जुन वेला मेरो मनमा 'आगो' थियो, फिल्म खेल्ने　। यति लामो फिल्मीयात्रामा मैले थुप्रै नयाँ/पुराना नायिकासँग रिल-जीवनमा नाच्न पाएँ, प्रेम गर्न पाएँ　।
फिल्मी अभिनयका सुरुवाती दिनमा मसँग अभिनय गर्ने नायिका खुब मिहिनेत गर्थे, उनीहरू आफ्नो चरित्र र भूमिकाप्रति निकै गम्भीर थिए　। आफ्नो बौद्धिक पक्षमा पनि ध्यान दिन्थे त्यतिवेलाका नायिका　। मैले अनुभव गरेको के भने, नायिकाहरू समयसापेक्ष छन्　। आजकालका नायिका मिहिनेत गर्छन्, तर उनीहरू आफ्नो भूमिकाप्रति खासै गम्भीर भएजस्तो मलाई लाग्दैन　। पहिलेका नायिकाजस्तो मिहिनेत पनि गर्दैनन् आजकालका नायिका　।
जीवनमा त्यस्ता थुप्रै घटना हुन्छन्, जो मनको कुनामा सधैँ सुरक्षित हुन्छन्　। ती क्षण फेरि समाउन नसकिनेगरी निकै पर पुगिसकेका हुन्छन्　। तर, हामीलाई तिनको सम्झनाले सधैँ घेरिरहन्छ　। पहिलोपटक फिल्म खेलेको सम्झना घरी-घरी आउँछ　। तर, त्यो सम्झनालाई म समाउनचाहिँ सक्दिनँ　। मेरो पहिलो फिल्म 'युगदेखि युगसम्म'मा नायिका थिइन् 'कृष्टि केसी'　। उनी अहिलेका चल्तीका कोही नायिकाजस्ती पनि होइनन्　। बौद्धिक थिइन्　। उनी अभिनय पनि राम्रो गर्थिन् र निकै सुन्दर थिइन्　। अहिले त उनी नेपाली फिल्ममा मात्र होइन, नेपालमै छैनन्　। अहिले अमेरिकामा छिन्, उनी　।
हरेक मान्छे सधैँ हिट भइराख्न सक्छ वा चर्चामै रहिरहन सक्छ भन्ने होइन　। नेपाली फिल्ममा एउटा युग थियो- मीनाक्षी आनन्द, तृप्ती नाड्कर, भुवन चन्दजस्ता राम्रा नायिकाको　। अहिले समयले उनीहरूलाई सम्बोधन गरेन भन्दैमा हामीले यो भुल्नुहुँदैन- इतिहास कहिल्यै पनि मर्दैन, यो सधै साक्षी हुन्छ समयको　। यो फिल्मी करिअरमा मलाई राम्रा लाग्ने र मन पर्ने नायिका मीनाक्षी आनन्द, गौरी मल्ल, कृष्टि केसी, करिश्मा मानन्धर, विपना थापा, निरुता सिंह, जल शाहहरू हुन्　। उनीहरूमध्ये कोही अहिले फिल्मको रंगिन दुनियाँबाट टाढा छन्　। तर, उनीहरूको योगदान नेपाली फिल्ममा निकै छ र दर्शकको मनमा बसिरहेका छन् भन्ने लाग्छ　।
'ग्ल्यामर' नेपाली मिडियामा बढी चल्ने शब्द हो　। ग्ल्यामरलाई धेरैले 'सेक्सी'का रूपमा पनि बुझ्छन्　। ग्ल्यामर आकर्षण हो　। नायिका ग्ल्यामर देखिन छोटै लुगा लगाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन　। नेपाली रजतपटकी ग्ल्यामरस नायिका करिश्मा मानन्धर, विपना थापा र झरना बज्राचार्य हुन्　। उनीहरूको अभिनय पनि नवनायिकाभन्दा अब्बल र उत्कृष्ट छ　। तर, तीमध्ये पनि ग्ल्यामरस लाग्ने नायिकाचाहिँ करिश्मा मानन्धर नै हुन्　। उनको ग्ल्यामर छवि अझै धेरै समय रित्तिने छैन　।
नायिकाको सही मूल्यांकन भएन　। हुन त वेला- वेला नेपाली नायिका विभिन्न स्क्यान्डलमार्फत चर्चामा आउने गरेका छन्　। केही निर्देशक/निर्माताले नायिकाको नाजायज फाइदा उठाउँछन् भन्ने पनि सुनिन्छ　। तर, यो कति सत्य हो मलाई थाहा छैन　।
मेरो विचारमा, कुनै युवती नायिका बन्न लालायित छ भने उसले बुझ्नुपर्छ, नायिका हुनका लागि पहिलो सर्त, 'आवरण-सुन्दरता' हो　। आवरणका साथै अभिनय क्षमता पनि चाहिन्छ　। निर्देशकलाई प्रभाव पार्न सुन्दर अनुहार चाहिए पनि भित्री सुन्दरता त अभिनय नै हो　। अभिनय पक्ष राम्रो हुनैपर्छ　। नत्र उनी कसरी राम्री नायिका बन्न सक्छिन् ? अभिनय क्षमता नभएका, तर निर्देशक वा निर्माताले मात्रै तानेर ल्याएका नायिका चाँडै पाखा लाग्छन्　। त्यसो भएको पनि छ　।
मसँग अभिनय गरेका नायिकामध्ये सञ्चिता लुइँटेलको आँखा निकै मन परेको हो　। उनको आँखा शान्त तलाउजस्तो छ　। जहाँ कुनै रंगीन माछा पैडिन सक्छ　। निरुता सिंहको आँखा पनि मलाई निकै मन पर्छ, सुन्दर लाग्छ　। उनको आँखा निर्दोष छ　। तर, कोही पनि नेपाली नायिकाको आँखा मादक लागेको छैन　। अभिनय मन परेको चाहिँ करिश्मा मानन्धर, विपना थापाको हो　। भारतीय नायिकाका आँखा निकै सुन्दर हुन्छन्　। उनीहरूको सबैभन्दा सशक्त पक्ष भनेकै आँखा हो　। ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षितहरूका आँखा भुतुक्कै पार्नेखालका छन्　। एन्जेलिना जोलीको आँखाचाहिँ मादक छ　। मैले कुनै वेला बलिउडमा राम्रैसँग जमेकी नायिका मनीषा कोइरालासँग पहिलो फिल्म खेलेँ, 'धर्मा'　। त्यसवेेला उनीसँग राम्रैसँग गफ जम्यो, मेरो　। सुटिङका वेला भेट हुँदा हामी पढाइ, करिअर र सपनाबारे कुरा गथ्र्यौं　। उनको धेरै पढ्ने बानी रहेछ　। मलाई पनि पढाइमा औधि रुचि छ　। उनी अरू नायिकाभन्दा निकै बौद्धिक लाग्यो　। नेपाली रतजपटमा फर्केर आउँदा उनी छुट्टै छवि लिएर आइन्　। उनी अभिनय पनि निकै राम्रो गर्छिन्　। झरना बज्राचार्य पनि मलाई बौद्धिक नायिका लाग्छ　।
दर्शक सधैँ 'केही नायिका अंगप्रदर्शन गरेरै चर्चाको शिखरमा पुगेका छन्' भन्ने दाबी गर्छन्　। नेपाली नायिकाले त्यस्तो विधि अंगप्रदर्शन गरेजस्तोचाहिँ मलाई लाग्दैन　। के नेपाली नायिका सधैँ ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट सिनेमा 'आमा'मा जस्तै गुन्यु-चोलीमै नाच्नुपर्छ भन्ने छ र ? सन् २००३ मा भारतीय निर्देशक रजत मुखर्जीको फिल्म 'लभ इन नेपाल'मा झरना बज्राचार्यले 'तानियाँ'को भूमिका पाइन्　। उनी 'कतरा...कतरा...' गीतमा दिएको अंगप्रदर्शनले हिट भइन्　। उनी त्यतिवेला विवादमा पनि आएकी थिइन्　। तर, उनलाई विवादमा ल्याउनुपर्ने खास कारण मैले देखेको छैन　। विश्वका अरू नायिका पनि अंगप्रदर्शन गर्छन्　। झरनाले पनि प्रसंगविना ठाउँ-कुठाउँ अंगप्रदर्शन गरेकी हुन्जस्तो मलाई लाग्दैन　। म त झरनालाई 'ब्रेन विद ब्युटी' भन्छु　। झरना 'ग्ल्यामरस' पनि छिन्　। नेपाली फिल्ममा जति नै अंगप्रदर्शन गरिन्छ भनिए पनि म त्यसलाई त्यस्तोविधि अश्लीलचाहिँ भन्दिनँ　। अहिलेकै पुस्ताले जस्तै सामान्य फेसन त फिल्ममा पनि अपनाउनुपर्छ नि !
अहिलेका नायिका कामप्रति लगनशील छन्　। धेरैजसो बौद्धिक छैनन्　। तर, केही नायिकाले भने अध्ययनमा चासो राख्न थालेका छन्　। सबैको यही आरोप छ, 'नेपालका नायिका आफूले अभिनय गर्ने फिल्मको स्त्रिप्ट पढ्दैनन्　।' तर, म यो स्विकार्न तयार छैन　। मैले अनुभव गरेअनुसार, नायिका आफ्नो भूमिकाबारे बुझ्छन्　। स्त्रिप्ट पनि पढ्छन्　। तपाईंले आरोप लगाएजस्तो, उनीहरू आफ्नो सुन्दरतामा मात्र ध्यान दिन्छन् भन्नेचाहिँ म मान्दिनँ　। दर्शक हाम्रा नायिकालाई घमण्डी पनि भन्लान्　। नायिकाले यस्ता कुराको वास्तै नगरी, आफ्नो अभिनय-क्षमता तिखार्न प्रयोग गरे राम्रो हुन्थ्यो　। नायिका सुन्दर त हुनैपर्छ　। तर, उनीहरूले आफ्नो सुन्दरता मात्र होइन, कला पनि बेचिरहेका छन्　। नेपाली नायिकाको सिमाना तोकिएको छ　। सुन्दर नभए त दर्शकले पनि फिल्म हेर्दैनन्　।
तर, हाम्रा फिल्ममा नायिकाको भूमिका कमजोर बनाइन्छ　। यसको कारणचाहिँ निर्देशक र 'स्त्रिप्टराइटर' हुन्　। हामी कलाकार त निर्देशकका आदेशपालक मात्र त हौँ नि ! स्त्रिप्टमा नायिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिन्न　। स्त्रिप्टमा जे लेखिएको छ, नायिकाले त्यही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ　। हामीकहाँ सुटिङको माहोलले पनि कलाकारलाई अभिनयमा डुब्न दिँदैन　। हाम्रो समाजमा विद्यमान पुरुषप्रधान धारणाले पनि नायिकाको भूमिकालाई कमजोर बनाएको होला　।
मलाई थाहा छ, नेपाली चलचित्रले समातेको मूलधारको गोरेटो फराकिलो छैन　। हामीले अझै धेरै कुरा सिक्नु छ　। मैले अभिनय गरेका धेरै फिल्ममा वर्षौंदेखि एउटै 'फर्मुला' प्रयोग भइरहेको छ　। बलिष्ठ पाखुरा भएको आदर्श नायक अनि कमजोर नायिका, नायक-नायिकाको प्रेम, तनाब, द्वन्द्व, हास्यमै हाम्रा फिल्म अल्झिइरहेका छन्　। फिल्म हेरिने विधा हो, जसलाई दर्शकले रुचाउनुपर्छ　। अनि मात्रै यो चल्छ　। दर्शकले रुचाउने फिल्म बनाइरहेका छौँ भन्ने लाग्छ　। जति नै आलोचना भए पनि नेपाली फिल्मले गतिचाहिँ लिएको छ　। तुरुन्तै परिवर्तन नदेखिए पनि ढिलोे-चाँडो दर्शकले स्तरीय फिल्म पाउँछन् नै　। सायद, नेपाली फिल्मले कलात्मक सीप भएका र आफ्नै गोरेटो बनाउन सक्ने सिर्जनशील व्यक्ति पाएको छैन　। म एकजनाले मात्रै चाहेर नेपाली फिल्मको स्तरवृद्धि हुने हो र ? फेरि म एकजनाका लागि निर्देशकले व्यावसायिक धारभन्दा बाहिरको फिल्म पनि त बनाउँदैनन्　। मैले मात्र के गर्न सक्छु र ? फिल्म स्तरीय बन्न धेरै पक्षले रोल खेलिरहेको हुन्छ　। हुन त मैले लगातार फिल्म पाएँ　। तर, पनि वेला-वेला मलाई लाग्छ-मैले त्यस्तो उल्लेखनीय काम गर्न सकिनँ, जसबाट म गर्व गर्न सकूँ　।